I-Queens View 1702
Queensburgh, KwaZulu-Natal, iNingizimu Afrika
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sonja
Ifulethi elinombono. Zanamuhla futhi zikhululekile. Amakheshi akuyisa esitezi se-17 lapho uzothola khona umbono wokhozi ngendawo ezungezile. Ukuvikeleka okuhle futhi eduze kwezinsiza. Sinezindlu ezihlangene ezinekhono lokulala izivakashi ezingu-6 lapho sibhukha womabili amayunithi. Imizuzu engu-25 kuphela ukushayela nokubuya eKing Shaka Airport.
Isendaweni efanele futhi imaphakathi nendawo. Ukuhamba ibangana nje ukusuka enxanxatheleni yezitolo iPavilion, maphakathi neTheku nasePinetown. Ukufinyelela Kalula kuyo yonke imigwaqo emikhulu kanye nemizuzu engama-20 ukusuka eMhlanga nakwamanye amabhishi.
4.75(65 okushiwo abanye)
4.75 · 65 okushiwo abanye
IQueensburgh ingamakhilomitha ayi-12 kuphela ukusuka echwebeni laseThekwini kanye nemizuzu engama-30- 40 uma uhamba ngezinyawo ukusuka emabhishi afunwayo afana noMhlanga Rocks (enyakatho) kanye neManzimtoti (eningizimu). Izungezwe ibhande eliluhlaza leziqiwi namapaki nokunye okuningi
Ngizotholakala kusukela ngo-9:00 - 16h00 phakathi nesonto futhi ngishayelwe ucingo ngezimo eziphuthumayo ngezimpelasonto.
Hlola ezinye izinketho ezise- Queensburgh namaphethelo